Badweynta Atlantika - Gpedia, Your Encyclopedia
(Waxaa laga soo toosiyay Badweynta Atlantika)
Oogada sare ee Badweynta Atlantika
w:en:atlantic ocean w:es:Océano Atlántico
Badweynta Atlantika (ingiriis: Atlantic Ocean) waa biyo dhanaan oo aad u baaxad wayn isla markaana qariya 20% oogada biyaha dhulka.
Badweynta Atlantika waxay ku fadhidaa baaxad dhan 106,400,000 square kilometres, waana bada 2aad ee ugu wayn badwaynta dhulka. Badweynta Atlantik ayaa ah kan labaad ee ugu weyn ee badda dunidoo dhan, iyada oo leh qiyaastii 106,460,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah (41,100,000 mayl laba jibaaran).   Wuxuu daboolayaa qiyaastii 20 boqolkiiba dhulka dushiisa iyo qiyaastii boqolkiiba 29 dhulkeeda. Waxay kala soocday "Old World" "New World".
Xeebta Atlantic waxay ku taallaa garaan ballaaran oo S-shaped ah oo dherer ahaan u dhaxeeya Yurub iyo Afrika ilaa bari, iyo Ameerika oo galbeed ah. Mid ka mid ah qayb ka mid ah baddaha caalamiga ah ee isku xiran, waxay ku xiran tahay waqooyiga badda Arctic, badweynta Pacific-ka ee koonfur galbeed, Badweynta Hindiya ee koonfur-bari, iyo Badweynta Koonfureed ee koonfurta (sharaxaadaha kale ee tilmaamaya Atlantic sida dhinaca koonfureed ilaa Antarctica). Dabiiciga Isku-dhafka Hadda wuxuu u kala qaybsamaa Badweynta Waqooyiga Atlantik-ka iyo Koonfur Atlantic oo ku saabsan 8 ° N 
Raadinta cilmi-baarista ee Atlantic waxaa ka mid ah dijitaalka dardargelinta, khariidadda German Meteor, Columbia University Lamont-Doherty Earth Observatory iyo Xafiiska Biyaha Hoose ee Maraykanka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Badweynta_Atlaantik&oldid=183318"